“In aan Muslim ahay darteed ayaa la ii garaacay” | Somaliska
“In aan Muslim ahay darteed ayaa la ii garaacay”
Gabadha lagu magacaabo Jennifer waa gabadh Muslim uur leh oo ku nool magaalada Umeå ee waqooyiga Sweden, taasoo weerar foolxun lagu qaaday isbuucaan. Jennifer oo wiilkeeda kula ciyaaraysa xadiiqada maalintii talaadada ayaa waxaa weeraray labo nin oo dhalinyaro ah kuwaasoo dhabarka ka haraatiyay isla markaana ku yiri hadalo hanjabaad ah.
“Dhacdadaan darteed waxaan dareemayaa caafimaad xumo iyo cabsi joogto ah. Maadaama aan xijaab xiranahay waxaan hubaa in la ii weeraray Muslim ahaan. Waan wacay booliska balse cidma iima imaan” ayay SVT u sheegtay Jennifer.
Waxay booliska ugu baaqday in uu si xoog leh u baaro weerarada naceybka ku salaysan ee ka dhanka ah Muslimiinta. Iyadoo intaasi ku dartay in aysan dooneyn in ay guri maxbuus ahaato cabsi ay ka qabto weerar lagu qaado.
Haweeney Soomaaliyeed oo ku guuleysatay bilad
Asc maxa waye cusiryentaa ka jirto Umeå Allah ha ka qabto Muslimiinta cursiryayaasha aamiin Yaa Allah! 👏👐❤👌
Asc runti ahaanti aad ayaan uga xumahey waxa ku dhacey ilaahey ha u saqiro kuwa gesteyna waxan rajeynaya in cadaalada la horkeeno
Asc wr wbt alle haka qabto sh ayaa diinta ku soo duulay gabadha muslimada ah iyo intii kale oona ogayn oo dhib kaa haysto
Suxufi somaliyeed says:
July 6, 2016 at 00:15
Anagaa Umeå joogna wax cunsuriyad oo ka jirtaa MA jirto Waa magaalada Swedan ugu fiican dhankasta nolosha Sxb beenta jooji sheeg meeshaad warkan ka soo xigatey